समीक्षा दिइन् जाहेरी, प्रहरीले पललाई पक्राउ गर्ने ! | khaltinews.com
पलविरुद्धको आरोप पुष्टि भए कम्तीमा १० वर्ष जेल सजाय हुने अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा बलात्कारको मुद्दा दायर भएको छ । नाबालिग गायिका समीक्षा अधिकारीलाई विवाह गर्छु भनेर फकाएर जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखेको भन्दै उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको हो ।
१७ वर्षीया समीक्षाले आफैँ पुगेर बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा शाहविरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन् । यसअगाडि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा शाहविरुद्ध जाहेरी दर्ताको प्रयास भएको थियो । तर कास्कीले आफ्नो कार्यक्षेत्र नपरेको भन्दै एक महिनाअगाडि नै तनहुँमा जाहेरी दर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसलगत्तै उनले मेडिकल चेकअप गरेकी हुन् ।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले उजुरी परेपछि शाहविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रवक्ता डिएसपी युवराज खड्काले उजुरी परेपछि शाहविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जाहेरी लिएसँगै अनुसन्धानका लागि पहल शाहलाई पक्राउको तयारी भएको छ ।
पल शाहलाई तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उपस्थित हुन भनिने र नआए पक्राउको तयारी गरिएको बुझिएको छ । एउटा म्यूजिक भिडियोको सुटिङका क्रममा तनहुँ गएका बेला शाहले फकाएर आफूमाथि करणी गरेको उनको आरोप छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी अधिकारीले शाहले आफूमाथि फकाएर करणी गरेको दाबी गर्दै आएकी छन् । नायक पल र गायिका समीक्षाको सम्बन्धबारे छरप्रष्ट अडियोहरू भाइरल बनेका छन् ।
चर्चामा आएको ‘अन्तरङ्ग’ सम्बन्धका बारेमा उनीहरू आफैँले विभिन्न मिडियासँग दिएको अडियो अन्तर्वार्ता बाहिरिएको छ । जसमा समीक्षाले आफूहरू सम्बन्धमा रहेको तर पलको आग्रहका कारण खुलाउन नसकेको बताएकी छन् । केही समयअगाडि पलसँग सम्बन्धमा रहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि समीक्षाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै कुरा भ्रामक भएको बताएकी थिइन् । फेरि पछि ती कुरालाई खण्डन गर्दै वास्तविकता अरू नै भएको र आफूले कुनै दिन सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी थिइन् । यसै क्रममा सोमबार पल शाहको एक अडियो सार्वजनिक भयो जसमा पलले समीक्षालाई अस्वीकार गरेको भनाइहरू थिए । साथै अर्कोतर्फ समीक्षाको पनि अडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा समीक्षाले पल शाहको प्रेममा कसरी फसेँ ? भन्ने कुराको वृत्तान्त बताएकी छन् ।
पलले गरेको केयरका कारण उनीसँग प्रेम सम्बन्धमा परेको बताउँदै समीक्षाले १६ वर्षको उमेरमा नै आफूहरूबीच शारीरिक सम्पर्क भएको पनि बताएकी छन् । आफूले अस्वीकार गर्दा पनि पलले भरोसा दिलाएर शारीरिक सम्पर्क गरेको पनि उनको भनाइ छ । यता, पलले भने ती कुराहरू वास्तविकभन्दा टाढा रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा गायिकालाई कसैले उकास्न लगाएको आरोप पनि लगाएका थिएन् । साथै पलले आफूलाई ‘प्ले ब्वाई’ को उपनाम दिएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । समीक्षाको भनाइलाई परिभाषित गर्ने हो भने उनी १६ वर्षको हुँदा उनीहरूबीच शारीरिक सम्पर्क भएको देखिन्छ । तर नाबालकसँग के सही के गलत भनेर निर्णय गर्ने क्षमताका लागि उनीहरूको मस्तिष्क विकास भइसकेको हुँदैन । त्यसैले शारीरिक सम्बन्धका लागि उनीहरूले गरेको निर्णयलाई नेपालको कानुनले अबोधताको दृष्टिले हेर्छ । यस घटनामा समीक्षा एक अबोध बालिका हुन् र पल शाह सही–गलतको निर्णय लिन सक्ने एक परिपक्व र पूर्ण सचेत व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनले समीक्षाप्रति अभिभावक/संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको अबोधता (मासुमियत) को फाइदा उठाएर करणी गरेको भन्ने व्याख्या कानुनले गर्छ ।
यसैले पनि यो मुद्दामा पल शाहलाई नाबालिका बलात्कारी ठहर गरी जेल पठाइन्छ भने समीक्षा अधिकारीलाई मानसिक साथै यौन र प्रजनन शिक्षा र सचेतनासम्बन्धी परामर्शका लागि पठाइन्छ । मन मिल्दैमा यस्तो मुद्दामा नाबालकको सहमतिलाई सहमति मानिँदैन । यदि समीक्षाले नै शारीरिक सम्बन्धका लागि प्रस्ताव राखेको भए पनि उनको त्यो अज्ञानतालाई पलले सम्झाई बुझाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कानुनले भन्छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १८, करणीसम्बन्धी कसूर दफा २१९ को उपदफा ३(घ) अनुसार पलविरुद्धको आरोप पुष्टि भए कम्तीमा १० वर्ष जेल सजाय हुने छ ।
कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।